Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in cidna aysan dan ugu jirin inay daba dheeraadaan xasaradaha Qadar iyo dalalka deriska la ah, isagoo booqasho labo maalmood qaadaneysa ugu ambabaxay gobolka.
Mucaaradka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa ku baaqay dibad baxyo iyo amar diiddo shacab si loogu qasbo madxaweyne Joseph Kabila inuu xilka isaga dego.
San Antonio: Siddeed qof oo ku dhintay gudaha gaari xamuul
Meydka Siddeed qof ayaa laga helay gaari kuwa xamuulka ah oo lagu baakimay bannaanka bakhaarka Walmart ee magaalada San Antonio, gobolka Texas ee dalka Mareykanka, sida ay booliisku sheegayaan.
Maamulka New Delhi oo u digay shirkadaha tubaakada soo saara
Andrew Robertson oo ku biiray Liverpool
Liverpool ayaa kooxda Hull City kala soo wareegtay Andrew Robertson oo daafaca ka dheela, ka dib markii ay ku heshiiyeen lacag dhan 10 milyan oo Pound.
Koobka Qaramada Afrika oo dhici doona June iyo July
Soomaaliya oo lacag cusub soo daabacanayso
Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay sanadkan qorshenayso in ay daabacato lacagtii ugu horaysay oo rasmi ah muddo ka badan 25 sano.
Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka ee Fifa ayaa Suudaan ka mamnuucday ciyaaraha, sababtuna waxay tahay faragalinta ay dawladdu ku hayso ciyaaraha.
Soomaaliya oo dooneysa in ay IGAD kala wareegto dowrka hoggaaminta dagaalka ka dhanka ah burcad badeedda
Safiirka Britain u fadhiya Muqdisho oo ka hadlay arrimaha Soomaaliya